स्वास्थ्य – Page 188 – दैनिक नेपाल न्युज
– गोपालप्रसाद बराल महोत्तरी, २६ भदौः महोत्तरी कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको सङ्ख्या अहिलेसम्मकै सर्वाधिक भएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षयता ३५० को हाराहारीमा रहँदै आएको कैदीबन्दीको सङ्ख्या अहिले ५०० पुगेको हो । कारागारको १६३ वर्षको इतिहासमा कैदीबन्दीको यो सङ्ख्या अहिलेसम्मकै सर्वाधिक भएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । जम्मा १३५ कैदीबन्दी राख्ने क्षमताको कारागारमा अहिले पुरुष कक्षमा […]
लामो समयदेखि अर्बुद्ध रोगबाट पीडित आलेलाई कतारबाट यती धेरै सहयोग
दमौली, २६ भदौः वैदेशिक रोजगारीमा कतार पुगेका तनहुँवासीको संस्था रिसिङ प्रवासी युवा समाज दोहा कतारले अर्बुद्ध रोगबाट पीडित व्यास नगरपालिका–१ भादगाउँ निवासी दिलप्रसाद आलेलाई रु एक लाख ६०० आर्थिक सहयोग गरेको छ । लामो समयदेखि अर्बुद्ध रोगबाट पीडित भई उपचार गराइरहनुभएका आलेलाई सहयोग गर्न समाजले कतारमा आर्थिक सहयोग सङ्कलन अभियान सञ्चालन गरेको थियो । सोही […]
कृष्ण ओलीले हात हाले, उनको हातले के-के काम गर्छ ? खुलाए सबै कुरा (भिडियो)
सामाजिक संजालमा रम्नुहुने नेपालिको लागी कृष्ण ओलि र रुपा मगर कुनै नौलो नाम हैन । उनिहरुको अवस्था र मायाको तारिफ गरेर सायद कोहिपनी थाग्दैन। बिवाह गरेको बर्ष दिनमै दुबै हात र खुट्टा गुमाएका कृष्ण अहिले मज्जाले हिड्न र हात हल्लाउन सक्ने भएका छन् । हात हाल्न मुम्बई गएका यि दम्पती गए राती नेपाल फर्केका हुन् […]
सप्तरीको रक्तसञ्चार केन्द्रमा रगतको अभाव
राजविराज, २६ भदौः सप्तरीको राजविराजस्थित रक्तसञ्चार केन्द्रमा रगतको अभाव भएको छ । “गर्मीसँगै रक्तदान कार्यक्रम कम हुँदै गएकाले रगतको अभाव भएको केन्द्रका इन्चार्ज नवीनकुमार झाले बताउनुभयो । रगत अभाव परिपूर्ति गर्न साटासाट प्रणाली लागू गरे पनि यहाँ रगत अभाव रहेको उहाँले बताउनुभयो । बढ्दो गर्मी र बिरामीको आवश्यकता अनुसारको रगत नहुँदा प्रत्येक दिन समस्या हुने […]
काठमाडौँ, २५ भदौः राष्ट्रियसभाको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले लामखट्टेको टोकाइबाट लाग्ने डेङ्गु रोगले देशभर आतङ्क सिर्जना गरेको हुँदा राष्ट्रिय सङ्कट घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद अधिकारीले यस्का विषयमा स्वास्थ्यमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै समयमै पहिचान गर्दा यो रोगबाट मर्नु पर्दैन भन्ने जनचेतना फैलाउन सरकारलाई […]
पर्वत, २५ भदौ । कुश्मा नगरपालिका–४ का अर्बुद रोगपीडित मीनबहादुर परियारलाई झण्डै रु १२ लाख सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ । पीडित परियारको उपचारका लागि थालिएको सहयोग सङ्कलन अभियानबाट सङ्कलन भएको रु ११ लाख ७४ हजार मङ्गलबार हस्तान्तरण गरिएको हो । पत्रकार रामकृष्ण लामिछानेको सक्रियतामा सङ्कलन भएको रकम एकमुष्टरूपमा परियारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । नेपाली काङ्ग्रेसका […]
बनेपा, २५ भदौ । काभ्रेपलाञ्चचोकको बनेपा नगरपालिका–५ आजादडाँडामा रेहको नेपाल–बनेपा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्अन्तर्गतको आङ्गिक शिक्षालय सो इन्स्टिच्युटमा कार्यरत पाँच करार सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति म्याद थप नगरिएको भन्दै राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन (सीटिइभिटी) र कर्मचारी सङ्घ (सीटिइभिटी)ले संयुक्तरूपमा थालेको आन्दोलन जारी राखेका हुन् । कर्मचारीहरुले शिक्षालय प्रशासनद्धारा […]
डेंगू रोगको लक्षण र बच्ने उपाय जानी राखौँ !
काठमाडौँ । डेंगुको संक्रमण देशभर फैलिनेक्रम बढे पनि समयमा नै उपचार गरिए सहज रूपमा निको हुने चिकित्सकले बताएका छन् । डेंगुको प्रकोप एक्कासि बढ्दा सर्वसाधरणमा अत्यधिक त्रास देखिन थालेको छ तर समयमा नै उपचार गरे रोगको जोखिमबाट पूर्ण रूपमा बच्न सकिने भएकाले त्रास नमान्न र डेंगुको लक्षण देखिना साथ समयमा नै अस्पताल गएर उपचार गर्न […]
मेलम्ची, २५ भदौ । मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै बाह्रबिसे नगरपालिकाले सुत्केरी हुने महिलाका लागि एम्बुलेन्स भाडा उपलब्ध गराउने भएको छ । समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नसकेर नगरका कोही पनि सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर नगरपालिकाले एम्बुलेन्स भाडा प्रदान गर्ने योजना अघि सारेको हो । नगरपालिकाको आकस्मिक कोषबाट एम्बुलेन्स भाडावापतको रकम उपलब्ध गराइने […]
हात्तीपाइले रोग परीक्षणका लागि विद्यालय सर्भे शुरु
इलाम, २५ भदौ । हात्तीपाइलेको सङ्क्रमण मानिसमा भएको वा नभएको थाहा पाउन यहाँ हात्तीपाइलेको विद्यालयस्तरीय सर्भे शुरु गरिएको छ । हात्तीपाइलेको लक्षण देखा परेपछि नयाँ प्रजातिको हात्तीपाइले रोगका बारेमा जानकारी गर्न सर्भे गर्न लागिएको हो । ‘टान्समिसन सिसमेन्ट सर्भे’ नामक सर्भे यही भदौ २२ गतेबाट इलाम र पाँचथरमा शुरु गरिएको छ । सर्भे विद्यालयस्तरका बालबालिकालाई […]
काठमाडौं । स्याउ स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यसको सेवन प्राय मानिहरुले गरेका हुन्छन् । हामीलाई स्वास्थ्य राख्ने फलफुलमा निकै लाभदायक मानिएको स्याउको फाईदाहरुको बारेमा धेरैलाई थाहा नै छ ।कतिपयले स्याउको बोक्रा र बियाँ फाल्ने गरेका छन् । स्याउको बोक्रामा पनि महत्वपुर्ण तत्वहरु पाईन पनि धेरै लाई थाहा […]
सल्यान, २४ भदौः जिल्लामा मौसमी ज्वरोको बिरामी बढ्न थालेका छन् । मौसमी ज्वरोको प्रकोप गाउँघरसम्मै फैलिएपछि जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बिरामीको चाप ह्वात्तै बढेको छ । भाईरल ज्वरोका बिरामी बढेपछि जिल्ला अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक बढेको अस्पतालका डा प्रदीप शर्माले बताउनुभयो । अस्पताल आउने अधिकांश बिरामीहरुमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, हातखुट्टा दुख्ने र रुघाखोकी लाग्ने […]
खातुनको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन
काठमाडौँ, २४ भदौः स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादवले एसिड आक्रमणबाट घाइते भई उपचारत् मुस्कान खातुनको उपचारमा कमी हुन नदिने जानकारी दिनुभएको छ । वीरगञ्जस्थित हनुमान माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न जाँदै गर्दा गत शुक्रबार बिहान खातुनमाथि एसिड प्रहार भएको थियो । उहाँको अहिले कीर्तिपुरस्थित अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ । चिकित्सकका अनुसार हाल उहाँको अवस्था […]
पोखरा,२४ भदौ : गण्डकी प्रदेशमा डेङ्गु रोगीको सङ्ख्या एक हजार १४ पुगेको छ । तीमध्ये ७९४ पोखरा महानगरपालिकाका बिरामीका साथै तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र नवलपरासीका गरी एक हजार १४ डेङ्गुबाट सङ्क्रमित भएको पोखरा महानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमन्त शर्माले जानकारी दिनुभयो । ४१ दिनको अवधिमा सो सङ्ख्याका मानिस डेङ्गुबाट पीडित भएका हुन् । सोमबार साँझसम्म […]
महोत्तरी, २४ भदौ: अत्यन्त आवश्यक उपकरणको अभावले उपचारमा समस्या ब्यहोरीरहेको बर्दिवास नगरपालिका–३ गौरीडाँडास्थित सर्पदंश उपचार केन्द्रमा क्रमशःउपकरण थपिँदै गएका छन् । विभिन्न संस्थाले आवश्यक उपकरण प्रदान गर्दै जाँदा सर्पदंशका जटिल प्रकृतिका बिरामीको उपचार पनि सहज बन्दै गएको हो । पछिल्लोपटक विपद् व्यवस्थापन र अन्य सामाजिक गतिविधिमा सरिक रहँदै आएको इन्हुरेड इन्टरनेशनल संस्थाले हाइभ्याकुम सक्सेन यन्त्र […]